Lööf: Dhabbada lagu hagaajin karo siyaasadda is-dhexgalka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Lööf: Dhabbada lagu hagaajin karo siyaasadda is-dhexgalka
Muhiimaddu waa is-dhex-galka.
La daabacay fredag 30 januari 2015 kl 11.35
Hoggaamiyaha xisbiga Dhexe - Center-ka (C) Annie Lööf ayaa markeedii ka hadashay siyaasadda xisbiga ee soo-galootiga iyo sida loo hagaajin karo is-dhex-galka. Lööf ayaa soo jeedisay in dawladdu ku maal-geliso degmooyinka, dhammaan miisaaniyadda kaga baxda qaabilaadda soo-galootiga, isla-markaana laga gudbo sida xaaladdu maanta tahay oo degmooyinka la siiyo lacag go'an oo jumlad ah.
Fikir-siyaasadeedkan ayaa ka mid ah war-bixin la xiriirta siyaasadda is-dhex-galka ee xisbiga oo lagu soo ban-dhigi doono kulanka hoggaannada xisbiga uga furmi doona maanta magaalada Nörrköping:
- Siyaasadda dalka ee soo-galootigu waa inay noqtaa mid ka wanaa-san sida ay iminka tahay. Xqiiqdii waxaa jira degmooyin fara badan oo ey ku dhaqan yihiin bulshooyin yaryar, isla-markaana xaaladdooda dhaqaale aaney u saamaxeeyn tirada ey qaabilaan ee soo-galootiga. Muddo gaaban ayey la soo gudboonaan kartaa iney soo galaan tiro soo-galooti fara bada nuna baahan iskuullo, hooy ey ku noolaadaan iyo taageerro deg deg ah oo loo fidiyo. Waa howl ey degmooyinkaasi wax ka qaban kari lahaayeen, hase yeeshee uu welwel ku hayo in dawladdu aanay miisaaniyad gelin dhaqaalihii ey ku howl-geli lahaayeen, sida ay sheegtay hoggaamiyaha xisbiga Dhexe Annie Lööf.
Kullanka hogaannada degmooyinka ee xisbiga Dhexe oo maanta uga furmi doona magaalada Norrköping ayaa waxaa lagu soo ban-dhigi doonaa fikirro labaatameeyo gaarsii-san oo ku saleey-san sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka ka aloo-san nidaamka is-dhex-galka. Halka fikirrada la soo jeedineyo ee xubnaha xisbigu ka doodeyo uu ka mid yahay in dawladdu ku miisaaniyad-geliso degmooyinka dhammaan kharashka kaga baxa qaabilaadda soo-galootiga. Halka maanta ay miisaaniyadda lagu maal-geliyo tahay mid aan ku filleyn, sida ay sheegtay Annie Lööf, hoggaamiyaha xisbiga Dhexe ee Center Partiet:
- Waa miisaaniyad duuduub ah, midda iminka lagu taakuleeyo degmooyinka, waanay hooseeysa. Waa mid loo baahan yahay in dib u eegis lagu sameeyo. Miisaaniyadda soo socota ee xisbigu qorsheeneyo inuu soo ban-dhigo ayaan si qeexan ugu caddeeyn doonnaa habkii loo miisaaniyad gelin lahaa. Waa dhaqaale gaarsii-san hal bilyan dheeri ah oo degmooyinku jeebkooda ka bixiyaan sidii ey u maal-gelin lahaayeen baahiyada soo-galootiga.
Xisbiga Dhexe ayaa raacay dhabbadii xisbiyada ey xulufada yihiin ee garabka midig oo dhowaantan soo ban-dhigey siyaasaddooda la xiriirta arrimmaha soo-galootiga. Xisbiga shacabka - Folkpartiet wuxuu tusaale ahaan soo jeediyay in siyaasadda is-dhex-galka la caddeeyo, isla-markaana lagu xiro suuqa shaqada. In matalan lagu xiro mideeynta qoyska inuu shakhsiga dalkan ku dhaqan ee doonaya inuu qoyskiisa la midoobo uu kafaalo qaadi karo masruufkooda iyo sidoo kale in la kordhiyo shuruucda deggenaansho ee ku meel-gaarka ah inta shakhsiga laga hubsaneyo inuu shaqo joogto ah muddo ku hayay dalka. Halka uu sidoo kale xisbiga Kristendemokraterna bil horteed uu hoggaamiyahooda dhowaantan ku dhawaaqay inuu jagada banneeyn mar uu soo ban-dhigayay sidii lagu hagaajin lahaa siyaasadda soo-galootiga ee xisbiga KD iyo sidii lagu hagaajin lahaa uu soo jeediyay in sharciga deggenaansho laga dhigo mid ku meel gaar ah iyo in la jaro dhaqaalaha la siiyo soo-galootiga haddii ey doortaan iney qaraabadood la deggaan. Hase yeeshee ay hoggaamiyaha xisbiga Dhexe ama Center-ka, sida afkan lagu yiraahdo Annie Lööf sheegtay in muhiimaddu tahay siyaasadda is-dhex-galka:
- Xisbiga Centerpartiet ma doonayo inuu xadido tirada soo-galootiga. Wuxuu xisbigu taageer-san yahay xeerarka iminkaba dalka u deg-san sida ey iminkaba yihiin. Hase yeeshee middaa aannu dooneynaa waxay tahay sidii aannu ku hagaajin laheyn is-dhex-galka iyo, isla-markaana ey dadyoowga socdaalka dalkan ku yimaada si dhakhsiya ugu howl-geli lahaayeen, luuqadda ugu baran lahaayeen iyo weliba in lagu tallaabsado sidii guryo hor leh loo dhisi lahaa sidii si hab-sami leh dadyoowgaa loogu soo dhoweyn lahaa dalkooda cusub:
- Waxaan jeclaan laheyn inaan xoogga saarno hagaajinta nidaamka is-dhex-galka, halkii laga doodi lahaa tirada soo-galootiga ee dalkan timaada iyo sidii loo xadidi lahaa, sida ay sheegtay Annie Lööf.